SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 37aad Safarkii sadaxaad ee Sindibad iyo Sheydaankii madoobaa. – Filimside.net
SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 37aad Safarkii sadaxaad ee Sindibad iyo Sheydaankii madoobaa.
January 25, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Taariikhda: January 25, 2019
Sindibaad oo waramaya kana sheekeynayo safarkiisii sadaxaad ayaa hadal ku bilaabay;
Markii aan kazoo laabtay safarkeygii labaad anigoo waliba aad u faraxsan kuna faraxsan inaan dib ugu soo laabtay magaaladeydii aan jeclaa ee Baqdaad waliba si nabad galyo ah ku imaaday ayaan gudo galay inaan nasto oo magaalada dhexdeeda ka ganacsado waxaana magaalada joogay in mudo ah.
Hase yeeshee waxaa la yiri wixii aad barato waa baaskaa nafteydii ayaa u xiistay safaradii aan gali jiray markii aan in mudo ahna ku fikirayay ayaan markii dambe go’aansaday inaan safarkii galo waxaana soo uruuriyay badeeco aad u fara badan anigoo si fiican usoo xirxiray waxaana kazoo ambo baxay magaalada Baqdaad anigoo u gudbay magaalada Basra isla mrkaasna tagay dakada magaaladaas waxaana halkaas kula heshiiyay oo kula kulmay markab aad u weyn.
Markabka waxaa saarnaa tujaar iyo dad aad u fara badan waxayn intooda badan iila maqdeen dad ahlu kheyr ah markaas ayaan markabkii ku dagtay dadkiina dhinac ka galay waxaana galnay safarkeenii.
Wixii aan socono oo magaalaba magaalo kale uga gudubno ayaan markii dambe waxaan arkay madaxii dadka markabka saarnaa kaasoo hareeraha eegaayay isla markaasna wajiga iska dharbaaxayo kadib wuxuu bilaabay inuu qeyliyo asigoo dharka iska jeexayo garkana iska jiidayo asigoo leh; waa halaagsanay waa noo dhamaatay waayo dabeyshii ayaa naga xoog badisay waana nagu qasab inaan raacno jahada ay dabeesha noo wado lakiin waxaad ogaataan iney jihadaasi tahay jahadii ay naga hirtay byyrtii daanyeerada mana jiro qof meeshaas nasiibkiisa ku riday oo kazoo badbaaday.
Intii uusanba hadalka dhameynin ayaan waxaan ka warhelnay daanyeeradii oo nagu hareereysan dhinac kastana naga jirto waxayna ahaayeen kuwa aad u badan oo aan tiro lagu gaarin.
Cabsi ayaan dareenay sidoo kale waxaan ka cabsanay hadii aan mid iyaga kamid ah dilno in xaalada xumaato oo ay na baabi’iyaan maadaama ay aad nooga tiro badnaayeen waxaana noqonay kuwa aad u cabsada lkn aanan wax dagaal ah galin.
Daanyeeradaas waxay ahaayeen muuqaal ahaan kuwa aad u fool xun mana jirin cid luuqadooda fahmeyso waxayna bilaabeen in xarkihii markabka ilkahooda ku jarjaraan ilaa uu markabkii ka gaaray dhulkooda waxayna boobeen alaab kasta oo markabka saarneyd.
Anaga markii aan dhulkii gaarnay ayaan markabkii isaga soo daganay maadaama ay daanyeerada la wareegeen sabab aan u sii saarnaano aysan jirin waxaana waqtigaas taagneen marba adeysan idin soo weerarin waa alx.
Jaziiradii markii aan galnay ayaan waxaan aragnay geedo miro ah oo jaziirada ka baxayay mirihii ayaan gurany misna cunay kadibna waxaan bilownay inaan jaziirada ku wareegno waa intaasoo ay leedahay ama joogaan dad anagoo kale.
Sidii aan u wareegeynay ayaan waxaan aragnay guri qeyn oo sida qasri camal u dhisan wuxuuna lahaa albaab alwaax ka sameysan, gurigii ayaan galnay waana ku wareegeysanay anagoo aragnay lafo banii aadam waqtigana wuxuu ahaa gabal dhicii markaas ayaan go’aansanay inaan habeenkii halkaas barino.
Cabaar markii aan halkii joognay ayaan waxaan dareenay gariir aad u weyn waxaana maqalnay jug culus iyo wax aad u weyn oo soo socdo ilaa wixii weynaa ee qasirigii soo galay wuxuuna ahaa mid aad u qaro weyn muuqaal ahaana wuxuu shabahay insaanka.
Wuxuu lahaa muuqaal aad u madow iyo indho aad moodo in ay holcayaan oo dab ka sameysanyihiin wuxuu kaloo lahaa miciyo waaweyn aadna u shhabaha kuwa doofaarka iyo cijiyo aad u dhaadheer.
Markii aan aragnay ayaan qaracanay aadna u naxnay, markaas ayuu agteena soo fariistay wuuna nasoo fiiriyay asigoo bilaabay inuu mid mid noo fiiriyo, marba mid ayuu qabanayay misna dhinacyada u gadinayay ilaa uu markii dambe soo qabtay kabtnakii markabka oo ahaa mid aad u buurnaa.
Markii uu kabtankii soo qabtay ayuu dabshiday isla markaasna bir dheer oo mudac ka sameysan kabtankii afka ka galiyay kadibna dabada ka bixiyay, wuxuuna bilaabay in asigoo nool oo cabaadayo uu dabkii ku dubto.
Alla xanuun badanaa adigoo nool sidaas halagu yeelo markaas ayaan cabsi tii aheyd la kulanay asigana wuxuu bilaabay in markii hilbihii bislaadeen uu cuno asigoo lafihiisa sidii kuwa malaayga ee aan cuno oo kale isaga bixinayay.
Markii uu hilibkii dhameystay ayuu seexday wuxuuna bilaabay inuu khuuriyo khuuro aad u weyn oo qasriga nala gariiray, ilaa laga gaaray subaxii oo waagii baryay, markaas ayuu inta kacay iska baxay.
Mar alle iyo markuu naga tagay ayaan bilownay inaan dhexdeena wada tashano oo wada hadalno sidii laga yeeli lahaa arintaan waxaana go’aan ku gaarnay in aan raadsano jaziiradaan tabtii aan uga bixi laheyn.
Waan soo baxnay anagoo bilownay inaan jaziiradii ku wareegeysano kuna meereysano waxaana tagnay dhinac kasta lakiin ha sheein markabkeeniina daayeeradii ayaa cad cad u googooyeen.
Markaas ayay talo nagu cadaatay waxaan sameynana waan garan weynay ilaa laga gaaray habeenkii.
Markii habeenkii la gaaray ayuu hadana wixii madoobaa markale soo laabtay wuxuuna bilaabay inuu na qabqabto oo na gadgadiyo ilaa markii dambe uu nagala baxay kii noogu buurnaa wuxuuna sameeyay sidii uu xalay sameeyay oo kale asigoo inta dubtay cunay kadibna iska seexday.
Subaxii markii la gaaray ayuu gacay wuuna iska baxay, markaas ayaan hadana talo kale isugu imaanay iyadoo marba uu qof talo soo jeedinayay ilaa aan makii dambe aniga ka dhex kacay.
Waxaan dhahay hadii xaalka sidaan ahaado khalaas waa noo dhamaatay oo waa halaagsameynaa lkn waxaan haayaa talo taasoo macquul ay tahay inaan ku badbaadno……
La soco qeybta 38aad.
Waxaa Aqrisay 1,355
Sxb bal jidwalka aad sheekada kusoo gelinay noo sheeg saan ula socono wwayo joogto maaha
Sxbyaal sheekadii maxaa ku dhacay baryahaan labadii sheeko oo ugu xiisaha badnayd midna ma hayno ma cilad farsamo ayaa jidha mise mashquul fadlan iiga jawaaba habeen walba sidaan u sugaayay ayaa waqtigu iga lumaa mida kale fadlan jadwal inoogu sameeya sheekooyinka si aan ula socono
Anupam Kher Oo Qarsan Jaceyl U haayo Shah Rukh Khan Isagoo Bartiisa Twitterka Kusoo Qoray…. April 18, 2019
Isbadalka muuqaalka: is bar-bar dhig lagu sameeyay sawirada atariishada caanka ah Ee Kajol Devgan April 18, 2019
Ka Dib Markan Aragnay Muuqaalka Salman Khan Ee Doorkiisa Xiligii Hore Ee Bal Aan Dib U Milicsano Aktarada Bollywoodka Kuwaaso Hore U Sameeyeen Doorka Loo Yaqaan Retro Ama Muqaaladii Hore April 18, 2019
Kasoo Bilow Ranbir Kapoor Iyo Alia Bhatt Ilaa Iyo Sara Ali Khan Kartik Aryan waxaa sanadkan la daawan doona aflaamo ay ku midoobayn 6 Lamaane Oo Jaceyl Ka Dhaxeeyo April 18, 2019
Kaama Liito: Katrina Kaif Oo Laga Soo Bandhigay Labo Kaarto Cusub Oo Kala Muuqaal Duwan April 18, 2019